Soo ogow qaar ka mid ah timaha qurxinta badan ee timaha wanaagsan | Bezzia
Timaha timaha wanaagsan
Susana Garcia | 02/05/2021 20:00 | Quruxda, Timaha
El timaha wanaagsan badanaa waxay leeyihiin dhibaatooyin dhowr ah midkoodna waa in uusan mug badan lahayn. Marka tani dhacdo, waxa aan isku dayeyno waa inaan ka dhigno mid mug leh oo tiro badan, oo leh nolol badan. Taasi waa sababta ay u jiraan qaar ka mid ah timaha iyo jarista oo kaa caawin kara inaad ku abuurto qaabkaas timahaaga taas oo kaa dhigeysa inaad illowdo inay fiicantahay oo aysan ahayn timo aad u tiro badan. Waxaa jira qaabab timo oo aad ku hagaajin doontid muuqaalka timahaaga.
ka dadka timaha wanaagsan waa inay si fiican u daryeelaan oo ka fikir sida loo qaabeeyo si ay u bixiso muuqaal mug leh oo caafimaad leh. Marka lagu daro daryeelka sheyga, waa run in muuqaalka sidoo kale kuxiranyahay sida aan u hagaajino timaheena, maadaama aan abuuri karno qaab gebi ahaanba ka duwan.
1 Midi mane ku habboon
2 Ku dhiira pixie ah
3 Tuujinta tolida
4 Bob gooyay mowjado
5 Daryeelka timaha wanaagsan
Midi mane ku habboon
Xitaa timuhu waxay kaa caawin karaan inaad abuurto sifiican oo muuqaal ah haddii timahaagu hagaagsan yihiin. Tani waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu caansan, maadaama haddii timaha si siman loo jaro, waxaad yeelan doontaa dareenka ah inuu ka badan yahay haddii aad ku gooyso lakabyada, maaddaama kuwani ay yareeyaan mugga. Ku Timaha Midi aad buu u xiran yahay waana nooc ka mid ah timaha taas oo si fudud loo hagaajin karo. Waxay na siineysaa kala duwanaansho weyn maxaa yeelay waxaan isticmaali karnaa qalabka timaha oo aan sameysan karnaa timo ama aan u xiran karnaa dabacsan. Sidoo kale waa mid ka mid ah timaha moodada xilligan, marka waa inaadan joojin xirashada. Waad siin kartaa xoogaa mug ama hirar ah tanina waxay abuuri doontaa muuqaal aad u tiro badan, oo iska dhigaya timo fiican.
Ku dhiira pixie ah
Timaha la jaray Pixie sidoo kale waa xulasho weyn. Pixie waa timo aad u gaaban laakiin waxay u egtahay mid kufiican qof walba, nooc kasta oo timo ah. Goynta pixie waa mid aad u fudud in la ilaaliyo waxayna naga caawineysaa inaan helno muuqaal casri ah oo dhulgariir leh, in kasta oo ay tahay arrin geesinimo leh oo aan qof walbaa jeclayn inuu xiro timihiisa oo aad u gaaban. Waa hagaagsan tahay haddii aad sidoo kale leedahay timo toosan maadaama aysan duleeli doonin.
Mid kale oo ka mid ah timaha oo aan sameyn karno haddii aan leenahay timo fiican oo dhaadheer waa inaan abuurno mid ka mid ah timaha kuwaas oo leh taabasho khaas ah maxaa yeelay waxay siisaa mug. Xaaladdan oo kale waxaan ka hadlaynaa xarig. Haddii aan ka dhigno mid aad u shanalaysan, timaha wanaagsan waa la arki karaa, laakiin haddii wax yar ayaanu qasnaa saameynta ayaa ka duwanaan doonta. Way fududahay in la arko sida timuhu u leeyihiin mug haddii xarigga waxoogaa laga jabiyo, markaa waa saameyn faa'iido u leh timaha noocan ah.
Bob gooyay mowjado
El timaha wanaagsan waa in caadiyan loo qaabeeyaa hirarka, Maaddaama haddii aan si toos ah u toosino waxaan kaliya ka dhigi doonnaa muuqaal aad u fiican. Goynta bob-ka dib ayaa loo cusbooneysiiyay waana la gashaday waxyar oo siman. Ku darida mowjadaha qaar timahan waa fikrad aad u fiican maadaama ay siinayso dhaqdhaqaaq badan iyo qaab.
Daryeelka timaha wanaagsan
Si loo daryeelo loona qaabeeyo timaha wanaagsan waa inaan tixgalino waxyaabaha qaar. Mid ka mid ah ayaa ah inay kafiican tahay shanlee timaha una qaabee burush wareegsan oo qalajir, laakiin sidoo kale leh qalab lagu sameeyo hirarka qaab fudud. Ka fogow toosiyaha si buuxda u toosinaya timahaaga, maxaa yeelay waxay u muuqan doontaa inay ka mug yar yihiin. Timaha sidoo kale waa in la daryeelaa maxaa yeelay si fudud ayey u jajabaan, markaa waa in si taxaddar leh loo cadaydo oo burush dabiici ah oo dabiici ah oo wanaagsan. Haddii aan xirno gaagaaban, wuu sii yaraanayaa, laakiin haddii ay dheer tahay, waa inaan isku daynaa inaan ka furno dhammaadka si aanan u jabin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Quruxda » Timaha timaha wanaagsan